Tontolo iainana – Latsaka ambany ny fahasalaman’ny ranomasina eto Madagasikara - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Tontolo iainana – Latsaka ambany ny fahasalaman’ny ranomasina eto Madagasikara
Maro ireo fanatsarana tokony himasoana. « Efa latsaka ambany ny faha- salaman’ny ranomasina eto Madagasikara », hoy Rabearisoa Ando, mpandrindra ny fandaharan’ asa mahakasika ny tontolo an-dranomasina eo anivon’ ny Conservation International (Ci), nandritra ny fampaha- fantarana natao ny zoma teo, momba ny fitaovana « Ocean Health Index », entina handrefesana ny fahasalaman’ny ranomasina. Mpikaroka 65, nahitana ny avy ao amin’ny Ci no nanao ny fanadihadiana nampitahana ny faha- salaman’ny ranomasina tamina firenena miisa 171 maneran-tany ary navoaka ny volana aogositra teo ny vokatry ny fikarohana. Rehefa nomena naoty ireo firenena isanisany ireo dia nahatratra 51/100 ny naotin’i Madagasikara. Ambany raha oharina ny an’i Maorisy (60/100), Seychelles (73/100).
10 karazana ireo mari- pandrefesana nampiasaina namaritana sy nahazoana ny voka-pikarohana, ka nisongadina be tamin’ ireo ny maha olona. « Ny tsy mbola fahitana vokatra mivaingana ny fiantraikan’ ny jono an-dranomasina eo amin’ny fanatsarana ny fiainan’ny mponina no anisan’ny nampihintsana ny naotin’i Madagasikara eo amin’io sehatra io. Eo ihany koa ny fihenan’ireo mpizaha tany tonga aty amintsika, ka tsy miteraka tombontsoa misongadina ho an’ny mponina », raha ny fanazavana ihany. Atao isan-taona ity fikarohana fandrefesana ny fahasalaman’ny ranomasina ity, ka mila ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana ny fahazoana manatsara ireo hita ho mbola lesoka.
SERANAN’IVATO Mbola hisy fivoriana faharoa hiarahan’ireo tompon’andraikitra rehetra eny anivon’ny seranam-piara­manidin’Ivato (zandary, polisy, fadintseranana…) sy ny Acm (Aviation civile de Madagascar) hatao, raha ny fantatra. Natao fomba handrindrana fiaraha-miasan’iretsy voalohany amin’ilay orinasa nokaramain’ny Acm hisehatra amin’ny fomba hahazoana antoka ireo seranam-piaramanidina valo manerana ny Nosy. Tsiahivina fa hitondra ny traikefany manoloana ny fiantohana ny seranana, hisorohana ny varomai­zina sy ny fampidirana na fanondranana tsy ara-dalàna eo anivon’ireo sera­nana io orinasa io. AMBATOVY Nandray anjara tamin’ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an’ny zava-manan’aina, niaraka tamin’ny minisite­ran’ny Tontolo iainana sy ny Ala, ny tetikasa Ambatovy ny 22 mey lasa teo. Ny maha zava-dehibe ny rano sy ireo zava-manan’aina no lohahevitra nandritra io fankalazana io. Isan’ireo laharam-pahamehan’ Ambatovy, mpitrandraka nikela sy kôbalta ao atsimo ny fandaharana asa entina hiarovana ny tontolo iainana.
Hetra – Misy mpandraharaha mandoa Tva koa any amin’ny banky (0)
Sady hifaninanana no hifandrotehana. Raha ny vaovao azo teo anivon’ny vondron’ireo mpandraharaha eto Madagasikara (Gem) dia efa misy ihany koa ireo mpandraharaha mandrotsaka ny hetra amin’ny fanjifana (Tva) ao anatin’ireo kaonty nosokafan’izy ireo any amin’ny banky. Anio indray no ho fantatra marina ny tahan’ireo mpandraharaha mbola mandoa ny hetra amin’ny fanjifana (Tva) eo anivon’ny foibem-pitondrana ankapobeny misahana ny Hetra (Dgi). Ny ankamaroan’ireo mpandraharaha lehibe mantsy dia mandrotsaka ny Tva-n’izy ireo any amin’ity foibe ity avokoa. Tsy hihemotra amin’ny lalana efa nirosoany ny Gem hanerena ny Fanjakana hitady vahaolana amin’ny fitontonganan’ny toekarena manoloana ny krizy. Efa mirangaranga ihany koa anefa ny mety ho fanenjehan’ny Dgi ny Gem noho ny fandrisihana ireo mpandraharaha tsy handoa hetra sy ny fano­dinkodinana fananam-panjakana. HNA
Fandraharahana – Mbola lavitra ezaka ny fananana kolontsaina manangana orinasa(0)
Mbola tsy mifototra ao an-tsain’ny ankamaroan’ireo tanora eto amintsika ny kolontsaina mandraharaha. Ny hitady asa avy hatrany mantsy no ihazakazahan’izy ireo, vantany vao nahavita fianarana. Tsy mahazatra ny ankamaroan’ireo mpianatra ny mieritreritra ny hanangana orinasa ho an’ny tenany. Mbola vitsy ankoatra izay ireo rafitra tsy miankina manohana izany. Tsy ampy koa anefa ny hetsika ataon’ny Fanjakana handrisihana ireo tanora hanangana orinasa. Nanasongadina ny lafy tsaran’ny fananganana orinasa amin’ny toekarena ankapobeny ny Genie­space, mpampiofana amin’ny kolontsaina mandraharaha. «Raha isika Malagasy no manana ny maro an’isa amin’ny orinasa mitsangana dia mijanona eto amintsika ny tombom-barotra ka ho ambony karama ireo mpiasa eto amintsika, na ny zana-bola amin’ny vola indra­mina aza dia mijanona eto amintsika raha ivon-toe­rana na banky malagasy no indramana izany…», hoy Rakotoarindrazaka Toanina Fidiniaina, tale mpitantana ny Genie­space. Mila manana traikefa Manana ny fahaiza-manao, ny fahaiza-mamorona ireo tanora malagasy raha ny nambarany ka mahazaka tsara izany fananganana orinasa izany. «Manana bakalorea miampy fianarana efa-taona sy traikefa tsy herintaona, na ma­nana bakalorea miampy fianarana roa taona miaraka amin’ny traikefa efa-taona dia efa afaka manangana orinasa», hoy izy. Raha ny fanamarihan-dRaolinirina Liliane, tompon’andraikitra eo anivon’ny oniversite tsy miankina Esp.Big anefa dia ny tsy fisian’ny vola iaingana mihitsy no mahatonga ireo tanora tsy mahavita manangana orinasa. «Tsy tokony hatao sakana izany. Ny fahaizana miara-miasa no mila volena. Afaka miara-miasa amina mpandraharaha efa manana ny ampy aloha dia miezaka ny mahaleo tena avy eo», hoy Rakotoarindrazaka Toanina Fidiniaina. Miezaka ny mamboly io kolontsaina mandraharaha io eny anivon’ireo oniversite tsy miankina ny Geniespace. Hanitry Ny Aina
VIDIM-BARY Niakatra 2% ny vidin’ny vary ao Toamasina noho ny fiakaran’ny daram-pitate­rana araka ny fanamarihan’ny sampana manara-maso ny vary. Lasa Ar 1 400 ohatra ny kilaon’ny vary vokarina eto an-toe­rana raha Ar 1 350 teo aloha. Nahitana fidinany indray ny kilaon’ny vary eto an-toe­rana sy ny vary afarana ho an’ Antananarivo noho ny fihenan’ny mpividy. TRANO Mihisatra ny tsenan’ny asa vaventy. Raha ny nambaran’ireo mpandraharaha eo amin’io sehatra io dia ny fanaovana mari-drafitra na mari-trano amin’izao fotoana izao no tena ilain’ireo olona manao trano ireo mpahay mari-trano ireny. An-kavitsiana ireo orinasa mahita tsena fanamboaran-trano. Tsikaritr’ireto farany ihany koa anefa fa ireo teratany vahiny manam­bady teratany malagasy no tena manorina trano. Trano manodidina ny Ar 80 tapitrisa eo no be mpanorina.
Tontolo iainana, Mpanoratra Rijakely, 10.09.2012, 10:19	FIARAHAMONINA